မွနျမာ့ လူ့အခှငျ့အရေးကျောမရှငျ နဲ့ ပတျသကျလို့ မှတျခကျြစကား – Kyaw Zaw Oo's Blog
May 5, 2019 May 5, 2019 kyaw zaw oo
မွနျမာ့ လူ့အခှငျ့အရေးကျောမရှငျ နဲ့ ပတျသကျလို့ မှတျခကျြစကား
မြန်မာ့ လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင် နဲ့ ပတ်သက်လို့ မှတ်ချက်စကား
လက်ရှိအနေအထားမှာ လူ့အခွင့်အရေးဖောက်ဖျက်ခံရမှုတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မြန်မာ့ လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်ထံ တိုင်တန်းပြီးသကာလ တရားမျှတမှုရှိရာဆီ ဦးတည်သွားနိုင်ကောင်းရဲ့ လို့ မျှော်လင့်တယ် ဆိုတာဟာ – ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအောက်မှာ ရွေးကောက်ပွဲဝင်ပြိုင်ပြီး ရခိုင်နိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေး ရနိုင်ကောင်းပါရဲ့ လို့ မျှော်လင့်နေတာနဲ့ သဘောချင်း အတူတူပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
နိုင်ငံတွေရဲ့ နိုင်ငံအဆင့် လူ့အခွင့်အရေး အဖွဲ့အစည်း အင်္ဂလိပ်လို National Human Rights Institution (NHRI) တစ်ခု အဖြစ် ပီပီပြင်ပြင် အသိအမှတ်ပြုနိုင်ဖို့ရာအတွက် ပဲရစ်အခြေခံမူတွေ (Paris Principles) က သတ်မှတ်ပေးထားတဲ့ စံမှတ်ကျောက် ခြောက်ရပ်ရှိပါတယ်။
တစ်။ လူသားတိုင်းအတွက် လူ့အခွင့်အရေးစံနှုန်းတွေအပေါ်မှာ အခြေခံပြီး အပ်နှင်းထားတဲ့ ကျယ်ပြန့်သော လုပ်ပိုင်ခွင့်တာဝန် –
နှစ်။ အစိုးရအာဏာစက်ကနေ ကင်းလွတ်ပြီး ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် လွတ်လွတ်လပ်လပ် စီးမံလုပ်ဆောင်ပိုင်ခွင့် –
သုံး။ လွတ်လပ်စွာ ရပ်တည်နိုင်မှု။
လေး။ လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ အလွှာအသီးသီးကနေ ကိုယ်စားပြုပါဝင်နေမှု –
ငါး။ အသုံးချရမယ့် ရင်းမြစ်တွေ လုံလုံလောက်လောက် ရှိထားမှု –
ခြောက်။ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုလုပ်ဖို့ရာ လုံလောက်တဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာ ရှိမှု – စတဲ့ စံမှတ်ကျောက်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။
ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်တွေကို သမ္မတက စိတ်ကြိုက် လွယ်လင့်တကူ ခန့်အပ်မှုတွေ စိတ်ကြိုက် လွယ်လင့်တကူ ဖြုတ်တာတွေ အပါအ၀င် အချက်အလက်များစွာနဲ့ တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးလိုက်တဲ့အခါ “မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်” ကို စံနှုန်းကနေ များစွာ အောက်ကို လျော့ကျနေတဲ့ အခြေအနေ ရှိတယ် ဆိုပြီးတော့ နိုင်ငံအလိုက် လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့အစည်း (NHRI) တွေရဲ့ အဆင့်သတ်မှတ်ပေးရတဲ့ ICC-SCA က သတ်မှတ်ထားဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်တော့ “မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်” ဟာ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်မှုတွေကို ငါတို့ လုပ်နေပါတယ် ဆိုပြီးတော့ လုပ်ချင်ယောင်ဆောင်နေလို့ရအောင် အယောင်ပြဖွဲ့စည်းထားတဲ့ အဖွဲ့အစည်းအဆင့် (“alibi” institution) မျှသာ ဖြစ်တယ်လို့ မှတ်ချက်ပေးထားကြပြီးသား ဖြစ်ပါတယ်။
မြောက်ဦးမြို့နယ်မှာ အရှင်လတ်လတ် ငှက်ဖျားလူနာကို ဖမ်းသွားပြီးတော့ အလောင်းအနေနဲ့ ပြန်ပို့တာ၊ မြောက်ဦး လက္ကာရွာက လက်နက်မဲ့ လူနှစ်ဆယ်ကျော်ကို ဖမ်းသွားပြီးတော့ ဆယ့်တစ်ရက်အတွင်း ဖမ်းဆီးခံရသူ သုံးဦး သေသွားတာ၊ ရသေ့တောင် ကျောက်တန်းကျေးရွာက လူသုံးရာနီးပါးကို ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးပြီး ညအိပ်နေချိန်မှာ ပစ်ခတ်တဲ့အတွက် ဖမ်းဆီးခံရသူ ခြောက်ဦးကနေ ရှစ်ဦးအတွင်း သေဆုံးတာ . . . ဒါတွေဟာ နိုင်ငံရဲ့ လခစား လက်နက်ကိုင်တွေ လက်ထဲမှာ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဖြစ်ရပ်တွေမှာ သေဆုံးသွားသူတွေဟာ “လူ” တွေ မဟုတ်လို့ လူ့အခွင့်အရေးကို ကာကွယ်ရမယ့် အဖွဲ့အစည်းက ပါးစပ် ပိတ်ထားတာလားလို့ မေးရမလို ဖြစ်နေပါပြီ။
၂၀၁၂ က အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာ ကော်မရှင်ရဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဝင်းမရ ကပြောခဲ့တာကိုလည်း အမှတ်ရစရာရှိပါတယ်။ “ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားနေတဲ့ နယ်မြေတွေကိုသွားပြီး စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေ လုပ်ဖို့ဆိုတာ အခုအချိန်မှာ မသင့်လျော်ပါဘူး” လို့ သူပြောဖူးပါတယ်။ (“To investigate in the conflict areas,” Win Mra said, “is not appropriate at this present point in time …”)
ခြုံငုံပြောရမယ်ဆိုရင် – ကျွန်တော်သာ ဦးဝင်းမရ နေရာမှာ အခုအချိန်ရှိနေခဲ့မယ် ဆိုရင် ကျွန်တော် အရမ်းရှက်မိမှာပါ။ ကျွန်တော့်ကို ဒီတာဝန်တွေမပေးဘဲနဲ့ သာမန်ပြည်သူတစ်ဦးအဖြစ်နဲ့သာ အသက်ရှင် နေထိုင်ခွင့်ပြုပါတော့ လို့ တောင်းဆိုမိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၂၀၁၉ မေလ (၆) ရက်
လကျရှိအနအေထားမှာ လူ့အခှငျ့အရေးဖောကျဖကျြခံရမှုတှနေဲ့ ပတျသကျပွီး မွနျမာ့ လူ့အခှငျ့အရေး ကျောမရှငျထံ တိုငျတနျးပွီးသကာလ တရားမြှတမှုရှိရာဆီ ဦးတညျသှားနိုငျကောငျးရဲ့ လို့ မြှျောလငျ့တယျ ဆိုတာဟာ – ၂၀၀၈ ဖှဲ့စညျးပုံအောကျမှာ ရှေးကောကျပှဲဝငျပွိုငျပွီး ရခိုငျနိုငျငံ လှတျလပျရေး ရနိုငျကောငျးပါရဲ့ လို့ မြှျောလငျ့နတောနဲ့ သဘောခငျြး အတူတူပဲ ဖွဈပါတယျ။
နိုငျငံတှရေဲ့ နိုငျငံအဆငျ့ လူ့အခှငျ့အရေး အဖှဲ့အစညျး အင်ျဂလိပျလို National Human Rights Institution (NHRI) တဈခု အဖွဈ ပီပီပွငျပွငျ အသိအမှတျပွုနိုငျဖို့ရာအတှကျ ပဲရဈအခွခေံမူတှေ (Paris Principles) က သတျမှတျပေးထားတဲ့ စံမှတျကြောကျ ခွောကျရပျရှိပါတယျ။
တဈ။ လူသားတိုငျးအတှကျ လူ့အခှငျ့အရေးစံနှုနျးတှအေပျေါမှာ အခွခေံပွီး အပျနှငျးထားတဲ့ ကယျြပွနျ့သော လုပျပိုငျခှငျ့တာဝနျ –
နှဈ။ အစိုးရအာဏာစကျကနေ ကငျးလှတျပွီး ကိုယျ့ဘာသာကိုယျ လှတျလှတျလပျလပျ စီးမံလုပျဆောငျပိုငျခှငျ့ –
သုံး။ လှတျလပျစှာ ရပျတညျနိုငျမှု။
လေး။ လူ့အဖှဲ့အစညျးရဲ့ အလှာအသီးသီးကနေ ကိုယျစားပွုပါဝငျနမှေု –
ငါး။ အသုံးခရြမယျ့ ရငျးမွဈတှေ လုံလုံလောကျလောကျ ရှိထားမှု –
ခွောကျ။ စုံစမျးစဈဆေးမှုလုပျဖို့ရာ လုံလောကျတဲ့ လုပျပိုငျခှငျ့အာဏာ ရှိမှု – စတဲ့ စံမှတျကြောကျတှေ ဖွဈပါတယျ။
ကျောမရှငျအဖှဲ့ဝငျတှကေို သမ်မတက စိတျကွိုကျ လှယျလငျ့တကူ ခနျ့အပျမှုတှေ စိတျကွိုကျ လှယျလငျ့တကူ ဖွုတျတာတှေ အပါအဝငျ အခကျြအလကျမြားစှာနဲ့ တိုကျဆိုငျစဈဆေးလိုကျတဲ့အခါ “မွနျမာနိုငျငံ အမြိုးသား လူ့အခှငျ့အရေး ကျောမရှငျ” ကို စံနှုနျးကနေ မြားစှာ အောကျကို လြော့ကနြတေဲ့ အခွအေနေ ရှိတယျ ဆိုပွီးတော့ နိုငျငံအလိုကျ လူ့အခှငျ့အရေးအဖှဲ့အစညျး (NHRI) တှရေဲ့ အဆငျ့သတျမှတျပေးရတဲ့ ICC-SCA က သတျမှတျထားဆဲ ဖွဈပါတယျ။
တကယျတော့ “မွနျမာနိုငျငံ အမြိုးသား လူ့အခှငျ့အရေး ကျောမရှငျ” ဟာ လူ့အခှငျ့အရေးဆိုငျရာ လုပျဆောငျမှုတှကေို ငါတို့ လုပျနပေါတယျ ဆိုပွီးတော့ လုပျခငျြယောငျဆောငျနလေို့ရအောငျ အယောငျပွဖှဲ့စညျးထားတဲ့ အဖှဲ့အစညျးအဆငျ့ (“alibi” institution) မြှသာ ဖွဈတယျလို့ မှတျခကျြပေးထားကွပွီးသား ဖွဈပါတယျ။
မွောကျဦးမွို့နယျမှာ အရှငျလတျလတျ ငှကျဖြားလူနာကို ဖမျးသှားပွီးတော့ အလောငျးအနနေဲ့ ပွနျပို့တာ၊ မွောကျဦး လက်ကာရှာက လကျနကျမဲ့ လူနှဈဆယျကြျောကို ဖမျးသှားပွီးတော့ ဆယျ့တဈရကျအတှငျး ဖမျးဆီးခံရသူ သုံးဦး သသှေားတာ၊ ရသတေ့ောငျ ကြောကျတနျးကြေးရှာက လူသုံးရာနီးပါးကို ဖမျးဆီးစဈဆေးပွီး ညအိပျနခြေိနျမှာ ပဈခတျတဲ့အတှကျ ဖမျးဆီးခံရသူ ခွောကျဦးကနေ ရှဈဦးအတှငျး သဆေုံးတာ . . . ဒါတှဟော နိုငျငံရဲ့ လခစား လကျနကျကိုငျတှေ လကျထဲမှာ ဖွဈပကျြခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။ ဒီဖွဈရပျတှမှော သဆေုံးသှားသူတှဟော “လူ” တှေ မဟုတျလို့ လူ့အခှငျ့အရေးကို ကာကှယျရမယျ့ အဖှဲ့အစညျးက ပါးစပျ ပိတျထားတာလားလို့ မေးရမလို ဖွဈနပေါပွီ။
၂၀၁၂ က အငျတာဗြူးတဈခုမှာ ကျောမရှငျရဲ့ ဥက်ကဋ်ဌ ဦးဝငျးမရ ကပွောခဲ့တာကိုလညျး အမှတျရစရာရှိပါတယျ။ “ပဋိပက်ခဖွဈပှားနတေဲ့ နယျမွတှေကေိုသှားပွီး စုံစမျးစဈဆေးမှုတှေ လုပျဖို့ဆိုတာ အခုအခြိနျမှာ မသငျ့လြျောပါဘူး” လို့ သူပွောဖူးပါတယျ။ (“To investigate in the conflict areas,” Win Mra said, “is not appropriate at this present point in time …”)
ခွုံငုံပွောရမယျဆိုရငျ – ကြှနျတျောသာ ဦးဝငျးမရ နရောမှာ အခုအခြိနျရှိနခေဲ့မယျ ဆိုရငျ ကြှနျတျော အရမျးရှကျမိမှာပါ။ ကြှနျတေျာ့ကို ဒီတာဝနျတှမေပေးဘဲနဲ့ သာမနျပွညျသူတဈဦးအဖွဈနဲ့သာ အသကျရှငျ နထေိုငျခှငျ့ပွုပါတော့ လို့ တောငျးဆိုမိမှာ ဖွဈပါတယျ။
၂၀၁၉ မလေ (၆) ရကျ
deaths during Tatmadaw's custody
Previous မွနျမာ့တပျမတျောကို တရားစှဲရနျ စဉျးစားသငျ့
Next မွနျမာဟာ ရခိုငျစဈပှဲမှာ ဘာကွောငျ့ ရှုံးနရေသလဲ (ဆောငျးပါး ဖတျညှနျး)